जो सदियों भन्दा बनाइयो सबै अवस्थित मनोवृत्ति, बीच, परिवार मान को गठन सबैभन्दा मानव जीवनमा महत्त्वपूर्ण छ। बच्चा जन्मिएको छ परिवारमा, मर्यादा संग बाँच्न सिक्दै, मान्छे आदर। आधारभूत प्रशिक्षण बिना परिवार मानिस समाजमा हुन धेरै गाह्रो हुनेछ। अर्को चरण - स्कूल मा परिवार मान को गठन। बच्चा, एक युवा उमेर मा, instructive रूपमा सबै जानकारी लिन्छ गर्दा, अक्सर उनको कुरा सुनेर। स्कूल भित्र परिवार मान को गठन को लागि ल्याइनेछ किनभने रोमाञ्चक छन्।
शिक्षा मात्र परिवार, स्कूल, तर पनि वातावरण छैन हुनुपर्छ। को किशोरी अक्सर आफूलाई पर्छ। समाज कस्तो मा उहाँले सबै आफ्नो मुक्त समय बिताउनुहुन्छ धेरै कुराहरू निर्भर गर्दछ। अक्सर, यो सार्वजनिक राय किशोरों मा परिवार मान धारणा को चेतना असर छ। त्यो कम्पनी सामूहिक धारणा केही प्रकारको आउन अनुमति दिइएको थियो। यो राय या बस तर्क सही थियो कि महत्त्वपूर्ण छ। विपरीत साँचो हो भने, बच्चा वा जवान व्यक्ति भविष्यमा जानिजानि गलत जानकारी उसलाई विशेषज्ञ काम गर्नेछ प्रभावित गर्ने प्रयास। राम्रो आमाबाबुले आफ्ना छोराछोरीलाई साना समय समर्पित र के परिवार मान र के तिनीहरूले आवश्यक व्याख्या गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
सबै आमाबाबु र घरमा वर्तमान सबै वयस्क को पहिलो, तपाईं परिवार मान परिभाषित गरेको हुनुपर्छ। को राय एकता तपाईं के आवश्यक छ बच्चा व्याख्या गर्न मद्दत गर्छ। परिवार मान गठन एक निश्चित जीवन शैली को विश्वास, परिवार बाहिरका मानिसहरूलाई आसपास गर्न सम्बन्ध कारण हो।
आमाबाबुले शिक्षकहरू चासो लिनुपर्छ, कसरी स्कूलमा परिवार मान को गठन छ। परिवार - बच्चा बाहिर संसारको ज्ञान आधार, समझ र धारणा दिन्छ जो आधारभूत एकाइ छ। तर स्कूल भवन मा आयोजित परिवार मान को गठन घटनाहरुमा, घर मा आफ्नो बच्चा सुन्न सक्नुहुन्छ कि सुरक्षित जानकारी सक्षम गर्नुहोस्। परिवार परिवार मान छ र बच्चा एउटा प्रारम्भिक उमेर तिनीहरूलाई बारेमा थाह भने, त्यसपछि उसलाई एक किशोरी त्यहाँ कुनै समस्या हुनेछ। यो धेरै वर्ष एक शिक्षक भन्छन्, मनोवैज्ञानिक र वैज्ञानिकहरू परिवार मा परिवार मान संग फिक्री लागि थियो।
विद्यालय र समाज
स्कूल मा परिवार मान गठन प्राथमिक विद्यालय सुरु। शिक्षक समाजमा रहेको आफ्नो बच्चा को पहिलो दिन परिवार मान र समुदाय को गठन हुनुपर्छ भन्ने विश्वास गर्छन्। तर आधार को गठन देखि बच्चा पहिले नै accustomed छ जो देखि repelled परिवारको ठीक मान, शिक्षक छन्। एक बच्चा एक निराश वातावरणमा हुर्के छ भने, egocentrism, उहाँले सार्वजनिक राय बेवास्ता गर्न सिकाइएको थियो, यो समाजमा outcast जस्तै महसुस हुनेछ।
यस्तो मान संग एक बच्चाको नजर मा स्कूल शिक्षा कर्मचारी यसलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। सहयोग गर्न एउटा मनोवैज्ञानिक एउटा यात्रा मान परिवार र समुदाय दुवै को धारणा संग समस्या समाधान। मुख्य कुरा हो - यो धूवा ध्यान र ठीक आवश्यक जानकारी उहाँलाई ल्याउन सुरु गर्न। समयमै मद्दत सही बाटो मा एक बच्चा पठाउनुहोस्। उहाँले महसुस यसलाई तुरुन्तै छैन, तर समय आफ्नो शिक्षकहरूको काम मूल्यांकन हुनेछ।
परिवार मान को गठन को लागि घटनाहरू लगभग हरेक विद्यालयमा आयोजित गरिन्छ। शिक्षालाई कर्मचारी सँगै आमाबाबु र छोराछोरी एकजुट गर्न प्रयास गरिरहेको छ। हरेक वर्ष, कार्यक्रम अनुसार, बाहिर "आमाको दिन" घटनाहरु, "खेल परिवार", पर्खाल समाचार पत्र परिवारको एक प्रदर्शनी बोक्न। परिवारको गठन सबै एकजुट मोल गर्न, छोराछोरी परिवार रूख वा व्युत्पत्ति नाम आकर्षित गर्न आग्रह गर्दै हुनुहुन्छ।
यस्तो घटनाहरू पाठ्यक्रम मा एक cohesive परिवार हुन्छ, आमाबाबुले छोराछोरीलाई र विपरित मदत। आपसमा आदर, एक आधार भाग गठन हेरविचार परिवार पारिवारिक कोड। परिवार छोराछोरीको शिक्षामा, तर पनि देश को जीवन मा मात्र होइन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। परिवार मान मार्फत आमाबाबुले तेज मानिस, आदर समाज आफ्नो बच्चा सफल बनाउन सक्नुहुन्छ।
बच्चाको जीवनमा छोराछोरीको शैक्षिक संस्थाहरू
सिकाउने कर्मचारी ल दशक लामो सबै विशेषज्ञहरु व्यवसायीक हुन् गठन गर्न सकिन्छ। यस मामला मा, यो अनुभव छैन, र उनको व्यक्तिको पेशा को सम्बन्ध मा। , केही योग्यता हुनुपर्छ बच्चाहरु संग काम गर्ने मनोवैज्ञानिक पनि सबै भन्दा कठिन किशोरी संग साधारण जमीन पाउन सक्षम हुन। पूर्वप्राथमिक पारिवारिक मान गठन फरक परिवारबाट छोराछोरीलाई जे कि आमाबाबुले, तिनीहरू यसलाई सधैं, राम्रो आदर हुनुपर्छ बच्चाको सम्बन्ध परिवर्तन छैन बुझे भन्ने सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। आदर्श परिवार आध्यात्मिक र नैतिक परम्परा पालन गर्दा एक विकल्प मानिन्छ, शैक्षिक र सामाजिक समर्थन वर्तमान छ।
बच्चाहरु अन्य परिवार र तिनीहरूलाई मा सम्बन्ध मा हेर्न को लागि पूर्वप्राथमिक पारिवारिक मान गठन आवश्यक छ। यो अक्सर देखि बालबालिकालाई हुन्छ विपन्न परिवार परिवार cohesion गर्न स्कूल गतिविधिहरु मार्फत आमाबाबुले आफ्नो मनोवृत्ति परिवर्तन।
परिवार मान बारेमा तर्क
संकीर्ण सर्कल र घर मा राम्रो परिवार मान बारेमा तर्क सुरु गर्नुहोस्। सबै परिवार सदस्य, विषय रीस उठाउनु हुँदैन अन्यथा कुराकानी परिणाम ल्याउन छैन। आमाबाबुले यो मुद्दा ध्यान भने, त्यसपछि बच्चा फरक मान्छे संग एक साधारण भाषा फेला पार्न सजिलो हुनेछ।
एकदम अक्सर, बच्चाहरु विषय "परिवार मानहरू" मा एक निबंध लेख्न कार्य दिइन्छ। र अक्सर बच्चाहरु के छ र के तपाईं लेख्न आवश्यक थाह जब अवस्थामा छन्। बच्चा साहित्य काम मा वर्णन छन् भनेर मान आफ्नो परिवारको परिवार मान तुलना गर्न सक्षम छ जब आदर्श एक विकल्प मानिन्छ। यस्तो रचनाहरूको मात्र ती बच्चाहरु जसको आमाबाबुले तिनीहरूलाई र शिक्षा आफ्नो ध्यान दिन लिखित।
सबै योजना काम अन्तिम परीक्षा सूचीमा प्रवेश। परिवार उपलब्ध मान fledged किशोरीहरूको मा भाषणले। सानो उमेर को बच्चाहरु राष्ट्रिय र विश्व साहित्य को कुनै ज्ञान छ। तिनीहरूले पुस्तकहरू वर्णन रूपमा परिवार मान को प्रजालाई, तुलना गर्न सकिन्छ।
के किशोर परिवार मान
किशोरों मा परिवार मान गठन एक प्रारम्भिक उमेर मा सुरु गर्नुपर्छ। बच्चा, साकार छैन ती मान आफ्नो आमाबाबु, बाल सदन, विद्यालय आपत्ति गर्न ल्याउन भनेर लिन सुरु हुन्छ।
किशोरों मा परिवार मान गठन - लामो प्रक्रिया, परिणाम जो परिवार मान्यता, भूमिकाको, फरक राय को समझ गर्न एक निश्चित मनोवृत्ति विकास गर्नुपर्छ।
विद्यालयमा, शिक्षकहरूको विशेष ध्यान Kiddies तिर्न ठूलो परिवार। तिनीहरू सबै आमाबाबुले कुराकानी र परिवार मान बारेमा चर्चा लागि समय रूपमा, निरन्तर काम गर्न आवश्यक छ। यस्तो अवस्थामा शिक्षक धेरै बच्चाहरु संग परिवार को सहायता गर्न आउनु पर्छ।
अक्सर, किशोरीहरूको परिवार मान बेवास्ता गर्नुहोस्। यो क्षण समाधान गर्न र सम्झना छैन क्रममा, शिक्षक विभिन्न सर्किट सिक्ने प्रक्रियामा शुरू छन्। पाठ यो किनभने शिक्षक व्यवहार को आकर्षक हुन्छ, सामान्य रूप मा स्थान लिन्छ।
परिणाम लागि लक्ष्य र उद्देश्य पालन गर्न - शिक्षक को मुख्य कार्य। कार्यशाला, एक खेल को रूप मा स्थान लिइरहेको, किशोर आफ्नै महत्वाकांक्षा बारे भूल र परिभाषित परिवार मान को प्रक्रिया मा संलग्न गर्न अनुमति दिन्छ। मनमा यस्तो कुरा मन हरेक विद्यालयमा स्वागत छ, तर सबै किशोरीहरूको सम्पर्क गर्न जाने छैन। यस्तो चर्चा व्यापक अनुभव संग एक मनोवैज्ञानिक सञ्चालन गर्नुपर्छ। किशोरों यी विषयहरू मा वार्ता तिनीहरूले यो जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छैन, र मात्र केही विपरीत को विश्वस्त छन् भन्ने विश्वास गर्छन्, हास्य कारण।
आधुनिक समाजमा परिवार मान
समाज को सम्पूर्ण लागि प्राथमिकता परिवार अधिकार छ। बलियो र भरोसायोग्य सम्बन्धको - मानव व्यक्ति को गठन को लागि आधार छ। आधुनिक परिवार मान प्रत्येक परिवार, आफ्नै प्राथमिकता उत्पादन विश्वास, धेरै फरक हुन सक्छ। यसलाई आफ्नो देश को युवा भविष्य निर्धारण गर्छ।
स्कूल घटनाहरू मा, छलफल आधुनिक परिवार मान रुख सुन्न। अर्को शब्दमा, वयस्क जीवनको लागि जवानहरूले तयार। र उचित त्यसैले, रूपमा यो सबै छोराछोरीको शैक्षिक संस्थाहरू हुनुपर्छ।
समकालीन समाज वरिपरि rushes। किशोरीहरूको अप काम गर्न जाने, छिटो बढ्न चाहन्छु, आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न थाल्छन्। तर जीवन मूल उद्देश्यले थियो बाटो सधैं काम गर्दैन। योजना मा किन प्रत्यक्ष धेरै गाह्रो छ? किनभने यो सख्त अनुशासन आवश्यक छ। जीवनमा आफ्नै स्थिति निम्न, जवान मान्छे जसबाट अरूको आदर गर्न ceasing, अन्य राय बारेमा बिर्सन्छन्। वरपरको समाज को कार्यहरू र दृश्यहरू लागि घृणा व्यक्ति को राय खाली हुन्छ भन्ने तथ्यलाई तिर जान्छ। यो कुनै एक उहाँलाई ध्यान सुन्न छैन दिन्छिन्। र यो धेरै डरलाग्दो छ। समाजमा कुनै परिवार मान संग जवान मान्छे अत्यन्तै असहज महसुस हुनेछ।
परिवार मान बच्चाको धारणा
बच्चा - सफा पानामा। उहाँले तिनलाई प्रस्तुत सबै जानकारी प्राप्त गर्न सुरुमा तयार थियो। सधैं यो जानकारी उपयोगी वा सही छ। किनभने विद्यालय समय समयमा वर्ग घण्टा "परिवार, परिवार मान।" यो छ कक्षाकोठामा घण्टा शिक्षा कर्मचारी कक्षा टोली लागि महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने विषय उठाउनु मौका छ। घटना, आमाबाबु र छोराछोरी मा उपस्थिति धेरै महत्त्वपूर्ण छ। पनि सबैभन्दा खराब बच्चा, उहाँले गर्दा आमाबाबुले आफ्नो दुरुपयोग सुने, र ती सुरक्षा छैन, र आफ्नो टाउको हल्लाउनु, बेचैनी को एक अर्थमा महसुस। उहाँले कक्षा मा आफ्नो स्कूलका साथीहरू र आमाबाबुको हो भन्ने तथ्यलाई द्वारा लज्जित। समाज, बच्चाको व्यवहार favoring छैन, र उहाँले स्पष्ट देखाइरहेको छ उसलाई गल्ती अर्को पटक दोहोर्याउन वा छैन मनन गर्न उत्प्रेरित गर्छ।
परिवारको शिक्षा कुराकानीमा को बच्चाहरु को मन मा मान संकीर्ण परिवारमा हुन्छ। स्कूलमा प्राप्त टिप्पणी निम्न, आमाबाबुले यो घरमा ल्याउन निश्चित हुनेछ। यो कुराकानीले उठाएको आवाज मा आयोजित छैन महत्त्वपूर्ण छ। बच्चा रोइरहेको सुरु, बन्द हुन सक्छ, यो कुराकानी को परिणाम छैन हुनेछ।
परिवार र परिवार मान स्नेह, आराम, समझ, आदर, प्रेम एउटा बच्चा मा सम्बन्धित हुनुपर्छ। आध्यात्मिक र नैतिक Serenity एकदम अक्सर चिन्तन गर्न किशोरीहरूको खुवाउनुभयो। यसबाहेक, तिनीहरूले आफूलाई साथ र आफ्नो साथीहरूको साथ तर्क। छलफलहरू पारिवारिक सम्बन्ध मान comrades फेरि आमाबाबुको साथ आफ्नै सम्बन्ध मनन गर्न एक अवसर दिन के घेरे।
किशोरावस्था धेरै जटिल छ। Boyish, आतंक कसैलाई वा केही कारण आमाबाबुको कुनै डर। तपाईं hysterical प्राप्त गर्न सकिँदैन, त्यसैले सन्तानलाई अवस्था र मनोवृत्ति परिवर्तन गर्दैन। आफ्नो गल्ती बच्चा उहाँले आफ्नै आमाबाबुको indifferent छैन भनेर हेर्न अनुमति दिन्छ, आफैलाई काम। तपाईंलाई थाहा बुझ्न होइन भन्न। यो बच्चा परिवारमा एक वयस्क उपज गर्न सक्षम छ भन्ने महत्त्वपूर्ण छ। र यो उमेर, तर मानव आदर र समझ उहाँले अझै पनि उहाँले आमाबाबुको साथ तर्क सकून् भनेर, पर्याप्त अनुभव छैन भनेर हो।
एक परिवार मात्र बच्चाहरु र वयस्क प्रत्येक अन्य सुन्न र सुन्न सक्षम हुँदा हुन सक्छ। बच्चा को आमाबाबुले सञ्चार गर्दा negation विधि बहिष्कृत गर्नुपर्छ। त्यहाँ तपाईं भविष्यमा वा त्यसो गर्न आवश्यक व्यक्ति स्पष्ट गर्न धेरै अन्य तरिकाहरू छन्। लागू घरेलु हिंसा आक्रमण गर्न जान्छ र वयस्क बेवास्ता गर्नुहोस्। यस्तो परिवार केटाकेटीलाई सायद आफ्नो आमाबाबुले कहिल्यै परिवार मान बारेमा कुरा zavedut, आफ्नै मा बढ्न। यो परिवार वर्दी हुन असम्भाव्य छ।
बच्चाहरूमा अभिभावक को अनुपात
सुरुमा, तपाईं आमाबाबुले प्रत्येक अन्य सम्बन्धित कसरी कुरा गर्न आवश्यक छ। यो जीवन मा सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो - एक तनावमुक्त वातावरण र बच्चाहरु संग परिवार मा अक्सर सन्तुलित आमाबाबु को psyche संग क्रममा सबै भएका अप बढ्न, तिनीहरूले परिवार भन्ने महसुस।
ठूलो परिवार वा समस्या देखि छोराछोरीको परिवार मान गठन व्यावहारिक उत्पन्न गर्दैन। यस्तो अवस्थामा, तपाईंले व्यक्तित्व को गठन चिन्ता गर्न आवश्यक छ। तर हामी थाह छ, अन्य बिना एक अवस्थित गर्न सक्दैन। यस्तो अवस्थामा योग्य विशेषज्ञहरु, मनोवैज्ञानिक, शिक्षकहरूको सहायता। अक्सर, dysfunctional परिवारबाट बच्चाहरु स्कूलमा धेरै समय खर्च गर्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ तिनीहरूले विभिन्न उमेरका बच्चाहरु संग कुराकानी गर्न सक्षम छन्, रुचि छन्।
यो स्कूल मा, तपाईं यदि तपाईं शिक्षकहरूको सल्लाह सुन्छ, धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ। त्यहाँ आफ्नो घरमा मान छ कि छैन भनेर बाहिर फेला उद्देश्य उपायहरु, छोराछोरीलाई यी मान फेला पार्न र तिनीहरूले आमाबाबुको व्यक्त गर्न खोज्नुभएको भन्ने तथ्यलाई नेतृत्व।
मनोवैज्ञानिक र शिक्षकहरू जो गैर-मानक रूपमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ विभिन्न परिस्थिति धेरै को व्यवहार मा। सबै छोराछोरी र आमाबाबुको परिवार मान को महत्व केवल एक सचेत, फरक छन्, र अरूलाई छैन।
सारांश, हामी छोराछोरीको जीवनमा छोराछोरीको शैक्षिक संस्थाहरू, किशोरों महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह भनेर भन्न सकिन्छ। बच्चा को व्यक्ति, परिवार र सामाजिक मान गठन प्रक्रिया मा असहज महसुस हुँदैन। र आमाबाबुले क्षमता छैन वा तिनीहरूलाई लागि यो व्यवसायीक गरेको छ बच्चाको जानकारी व्यक्त स्वामित्व इच्छा छ, भने।
शिक्षकहरूलाई को मुख्य उद्देश्य - मात्र परिवार र सामाजिक मान छैन सिकाउन, तर पनि यी अवधारणाहरु तुलना गर्ने मौका दिन। केही सोध्छन् सक्छ: "?" परिवार मान "किन बच्चा विषय मा एक निबंध लेख्न"। यो कि शिक्षा कर्मचारी घरमा आमाबाबुले संग एक बच्चा कुरा र कसरी त्यो परिवार मान गठन र स्कूल मा काम गर्न कोसँग बुझ्न सुनिश्चित छ। यो संस्थाले देखि, कुनै बच्चा वयस्क जीवनको तयार मा आउनु पर्छ।
स्कूलमा, यो मुद्दा ध्यान धेरै प्राप्त छ। आमाबाबुले कुराकानी र छोराछोरीलाई कक्षा घण्टा प्रक्रिया हो। शिक्षक, छोराछोरी र आमाबाबुको सञ्चार, दुई पक्ष को प्रतिक्रिया मा देखिन्छ। आमाबाबुले कसरी प्रशंसा गर्ने प्रतिक्रिया वा दुरुपयोग धेरै निर्भर मा। पनि गणित को सबै भन्दा साधारण शिक्षक धेरै राम्रो मनोवैज्ञानिक छ। उहाँले नाङ्गो आँखा संग देख्न र एक विशेष परिवार मा सम्बन्ध कस्तो देख्न सक्छौं। उहाँले यो बच्चा वा अवस्थित सम्बन्ध आधारमा छैन थप काम गर्न आवश्यक छ। सबै स्कूल सुविधाहरु वयस्क जीवनको लागि तयार थिए छुट्टी को समयमा आफ्ना विद्यार्थी भएको रुचि हो, र यो परिवार र समुदाय मान समझ बिना असम्भव छ।
राम्रो र नराम्रो को एक प्रतीक। यिन-यांग। मिश्री पंथ मा बिरालो। पाम खुला (सानो किसिमको माछा)
भ्यागुतो कहाँ सीतनिद्रा र के तिनीहरूले हिउँदमा के? भ्यागुतो जस्तै जाडो लागि तयार?
पन्नी मा माछा। नुस्खा
शान्ति को ढुकुरले (कागज बाहिर शिल्प): योजना